Taliska Ciidamada Booliska Puntland oo Amaro cusub oo la xiriira sugida amniga Caasimada Garowe soo saaray. | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Taliska Ciidamada Booliska Puntland oo Amaro cusub oo la xiriira sugida amniga...
Taliska Ciidamada Booliska Puntland oo Amaro cusub oo la xiriira sugida amniga Caasimada Garowe soo saaray.
Sarreeye Gaas Muxuyadiin Axmed Muuse Taliyaha Ciidamada Booliska Puntland oo shir jaraaid ku qabtay Magaalada Garoowe ayaa amaro cusub oo lagu sugayo amniga caasimada Puntland ee Garoowe soo saaray, Taliyuhu wuxuu ka hadlay ciidamada aan shaqada ku jirin ee qoryaha ku dhex sita magaalada, dadka hubka ku ilaaliya bogcadaha ku yaala Magaalada Garoowe, Goobaha ku teedsan laamiga ee lagu gado qaadka qaarkoodna lagu qayilo iyo dhalinyarada ku hawlan taleefoon furashada.
Ugu danbayn Taliye Muxyadiin waxa uu waalidiinta faray in ay la socdaan dhaq-dhaqaaqa ubbadkooda, waalidkii ilmahiisa lagu qabto falal lidi ku ah amaankana uusan hadhaw xabsiga uga daba-iman.
Previous articleWadan Kuyaala Yurub oo ku dhawaaqday go’aan halis ku ah Daacishta Somaliya
Next articleAKHRISO: Ganacsatada Gobolka Banaadir oo War kasoo saaray Lacago looga qaado Dhismaha Wadooyinka Muqdisho
Akhriso Qodobada: Muxuu dastuurka ka qabaa talaabada ay JUBBALAND ku musaafuriso Taliyayaasha ay magacawdo DFS?
Magaca ciyaaryahan oo cabsi iyo jahwareer ka dhax abuuray diyaarad rakaab gudaheeda
Shabaab oo u aar guday shirkada Hormuud telecom hadana bur burisay shirkada Safaricom
Mareykanka Oo Sheegay In Uu Duqeyn Ku Diley Xubno Ka Tirsan Al-Shabaab
Wararka been abuurka ayaa caqabad ku noqday la dagaallanka coronavirus
Sacuudiga Oo war cusub kasoo saaray halka uu ku dambeeyo meydka Jamaal Khashoggi
Guddoomiye Cabdi Xashi oo shir Heer Caalamiya ooga qeyb galay magaalada Dooxa